Cabdi Cadde "Cidda kaliya ee cadawga soo jireenka Itoobiya shacabka Soomaaliyeed ka Difaacaysa Waa Al Shabaab ee hala garab istaago".
Sunday August 09, 2015 - 17:33:22 in Wararka by Super Admin
Tobanaan kun oo katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa duullaan gardarra ah kusoo qaaday gobollo dhaca Koonfurta iyo bartmaha dalka Soomaaliya halkaasi oo ay ka geysanayaan gabood-fallo bahalnimo ah.
Itoobiya waa cadawga soo jireenka ah ee umadda Soomaaliyeed leedahay waxay doonaysaa in soomaaliya ay ku darsato dhulka soomaaligalbeed ee gumeysiga kujira si imbiraadooriyadda Addis Ababa ee Nasaarada ah ay u waarto.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 120-kun illaa 130-kun oo askari kuwaasi oo hubkoodu u dhamaystiranyahay.
Bil ka hor ayay dowladda Itoobiya dagaalka kusoo biirisay ciidanka cirka oo kaalin wayn ka geystay qabsashadii magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere,Itoobiyaanka waxaa ka go’an in gobollada dhaca xadbeenaadka ay si toos ah u maamulaan.
Waxaa beenoobay sheegashadii Dowladda xasan Sheekh ee aheyd in 4,000 oo ciidan Itoobiyaan ah ay AMISOM ku biireen waxaana muuqata in Xabashida Itoobiya ay si iskeed ah u maamulayso ciidamadeeda qabsaday gobollada Bay,Bakool Gedo,Hiiraan iyo qeybo Galguduud katirsan.
Ciidamada cadadkaasi leh waxa kaliya ee diinka ,dalka iyo dadka ka difaacaya waa xarakada Shabaabul Mujaahidiin,wiilal yaryar balse alle iimaan siiyay ayaa shafka u dhigaya taangiyada iyo diyaaradaha Xabashida iyagoona kula halgamaya dhulka howdka ah iyo magaalooyinka.
Aqoonyahanka Cabdi Cadde oo kamid ah indheergaradka soomaaliyeed ayaa sheegay in dagaalka soomaaliya ka socda uu maalinba maalinta ka dambaysa marxalad cusub lugta gelinayo.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayuu ku tilmaamay geesiyaasha qarnigan ee bariga Afrika,”allaha dhowree dhalinyarada Al Shababaab la’aantood maanta soomaali maxmiyad gumeysi oo aan soo kabsasho laheyn ayay geli laheyd,Ciidamada Itoobiya ee soomaaliya kusoo duulay iska caabin adag ayay kala kulmayaan shabaabul Mujaahidiin runtii waa naftood hurayaal taariikhda baal dahab ah ka galay”.
Kuwa khuwana ah ee sheegta madaxda soomaalida ayaa sida eeyaha oo kale warbaahinta uga qeyliya iyagoo ku qeylinaya "Nabad diidka alshabaab ciidanka qaranka iyo kuwa Itoobiya ayaa magaalo hebel ka xureeyay”!!.
Shaki kuma jiro in soomaali ay iska xureyn doonto cadawgeed balse waxaa kala qormi doono laba taariikh oo kala duwan qaarbaa lagu sheekaysan doonaan wanaagii ay umadda uqabteen halka qaar lahilmaami doono oo ay noqon doonaan duke cambaar leh.
Dagaalka lagula jiro shisheeyaha afrikaanta ah wuxuu waajib ku yahay qof walba oo muslim soomaaliyeed ah waa in uu diinkiisa iyo dalkisa difaacaa haddii kale wuxuu mari doonaan meel xun,soomaaliyeed ma doonaynaa in aan noqon sida Jigjiga ama Harar oo kale maya maya waa in aan gumeysiga ka dhiidhinaa.